Iingcebiso zokudweba izinto ezinzulu kwi-Art
Indlela yokugwema iimpazamo eziqhelekileyo
Iingcamango - nokuba ngamanzi, iwindow, okanye ubuso bento ekhanyayo-kunokumangalisa ukuba kulula ukuyifaka . Sekunjalo, sihlala sicinga ngathi kunzima kwaye senze umsebenzi ube nzima kunokuba kufanelekile. Kukho iifolo eziqhelekileyo eziza kubakho xa zibonisa ukuboniswa. Iindaba ezilungileyo kukuba zonke ezi zinto ziyakuphepha xa uthembela nje amehlo akho.
Ngokuqhelekileyo, ingxaki yokudweba imbonakalo ivela ekucingeni ukucinga njengento edibeneyo yezinto eziza kubanjwa. Sizama ukwenza imithetho malunga nokudweba izinto kwaye sisebenzise ezi mfutshane. Ngoko xa sibona into eyinkimbinkimbi, sicinga ngelo 'nto' kunokuba siphezulu.
Masithi isakhiwo sibonakalisiwe; Ngokukhawuleza sicinga ngeembono kunye neengcongolo. Xa umntu ubonakaliswa, sondela abantu. Yintoni eyenzekayo xa kukho ukukhanya kokukhanya okanye ukuqhuma komnye wezo zibonakaliso? Ezi ziphazamiso ezibonakalayo zendalo zibonakalisa indlela yethu kunye nesimo esizama ukuyibeka - isakhiwo okanye umntu-uqokelele.
Isitshixo ekuboniseni iziboniso ngokulula ukuyeka ukuzama ukujonga nganye into ekudwebeni kwakho njengento ehlukeneyo-umthi, umntu, umlambo. Endaweni yoko, cinga nje ngohlobo lwemilo kunye nexabiso.
Ngoxa udweba, uphinde uphinde ulandele indawo yakho emithathu-ntathu kwi-plane-dimensional plane. Umzobo awunanto ngaphezu kweqoqo leendawo ezikhanyayo kunye nemnyama. Okubaluleke kakhulu ukuzama ukuthetha ngokuchanekileyo kunye neenkcukacha ezifunekayo kwezi zibane kunye nemnyama.
Gcina ubuso owudwebayo, uze urekhode ukutshintshwa kokukhanya kunye nomnyama kuwo - kulula njengaleyo.
(cc) UYohn no-carolina
Ukuzama ukuphoqa imiphumo engabonakaliyo enye yeyona mpazamo ephambili eyenziwa ngabaqalayo .
Ngokomzekelo, ezininzi iimbonakalo emanzini ziya kuhamba ngqo ngqo ngaphandle kokuguquka. Oku kuya kuguqulwa ngokusekelwe kwindawo yakho yokujonga, kodwa kwinqanaba leeliso, ngokuqhelekileyo liyinyaniso.
Ngokufanayo, isakhiwo esicacileyo siza kuba nesinye sezinto eziphazamisayo kunye nokucinga kuya kuba neyakhe. Ngokuqhelekileyo, oku kulandelelaniswa kwisakhiwo nakuba kuya kuhluka ngohlobo lwefestile.
Ukudweba umfanekiso oboniswayo kwifestile yevenkile yinye imeko yokuqwalasela oko kubakho. Ungazami ukwakha imbono ngokwemiqathango ecatshangelwe. Yithembela amehlo akho uze ubhale oko ubonayo, kungekhona oko ucinga ukuba kukho.
Ukuba udweba kwi-imagination , sebenzisa umfanekiso wesimboli wesimo esinama-angles afanayo njengesikhokelo.
Ukuphazamiseka kwiindawo ezibonakalayo
Phantse zonke iimpawu ziphazamisa into ebonisiweyo. Oku kubonakala ngokubanzi kwiifestile ezinkulu okanye ezo zincinci kwizakhiwo ezinkulu kakhulu. Ukuphazamiseka kunokuncinci, kodwa balapho kwaye abaculi bafuna ukukulungisa.
Phinda udwebe oko usibonelayo. Kungase kubonakale kungaqondakali ekuqaleni, kodwa kwimifanekiso eqingqiweyo kuya kuqondakala kwaye 'ufunde' njengendawo ephosakeleyo.
Xa u-shading reflection, vumela amanqaku akho ukuba ajikeleze okanye ngaphaya komhlaba wento ebonakalisa ngathi ipepati. Oku kuqinisekisa ukuba ubuso bunengqiqo.
Ukuthungwa mhlawumbi yenye yezinto ezinzima kunzima ukujamelana nomhlaba. Iindawo ezincinci zibonisa into ngokuchanekileyo, ngelixa u-satin texture udala isigqubuthelo okanye iphethini kuwo. Unesisombululo esincinci ngokuxhomekeke ekufakeni.
Omnye u kubeka ingcamango ebonakalayo, njengokungathi ibonisiwe. Emva koko udibanise umphezulu nge-shading eyongezelelweyo okanye ukucima.
Ungasebenzisa kwakhona ngokubhaliweyo ngokukodwa kwamakethi ukudweba. Nika ingqalelo kwimida: ingabe iphosa okanye iphosa? I-eraser exoxayo iyanceda ekuphakanyeni izinto ezigqwesileyo kunye neengcambu ezithambileyo, ngelixa i-eraser emhlophe ephambili yeplastiki ihamba kakuhle.
Xa umgca weskrini, ubamba ukucatshulwa ngokukhawuleza. Sebenzisa ubuqhetseba obuqingqiweyo bomgca ombalwa okanye ogciniweyo obubonisa ukuphakama kweglasi. Uzibonele ezi zihlandlo ezininzi kwiimifanekiso kunye namahlaya.
I-Mirror, kodwa ayikho umfanekiso wesigidi
Khumbula ukuba umboniso awusona umfanekiso wesibuko ukusuka kwiplani yokushicilela. Esikhundleni salo, yimbono ukusuka kwinqanaba elihlukile. Oku kubalulekile kuba ukucinga kuya kubakho ukubona izinto ezingabonakali kwinto ngokwazo.
Kwimihlaba, umzekelo, uya kuqaphela ukuba umboniso utyhila kancane ngaphantsi kweebhuloji okanye isithunzi sezityalo ezigqithiseleyo. Umthi oboniswe emanzini unokuba namaqabunga avelayo, avela ngaphantsi kwamagqabi afihlayo.
Kwakhona, jonga ukukhanya okubonisiweyo okukhanyisa zombini isithunzi kunye nomfanekiso wayo.
Xa ukhangelelwa emanzini, khumbula ukuba amanzi ahlala ephahleni, aphezulu. Ngamanye amaxesha, umgca ongezantsi ungadinga ukuchaza ukuqhuma okanye ukucamngca, kodwa sebenzisa umthunzi ojikelezayo ukuze uhlale uphezulu.
Qaphela ukuba ungakhange uqaphele umthunzi wakho kwiindawo ezincinci ezinkulu. Ufuna ukuphepha ukudala i-bump ebonakalayo emanzini engenakwenzeka.
Kwakhona, qaphela izixhumo zokuxhumana. Yilapho into edibanisa nomhlaba kwaye ngenxa yokuba akukho ukukhanya okuboniswa khona, uya kugcina umgca omnyama.
Ukuqwalaselwa kunye neengcebiso zoKwenziwa kweeNkcazo
Funda iindlela zokudweba zePencil Cezanne Uyakuthanda!
Indlela yokudweba i-Manga Cyborg Girl
I-Intelligence Object Pronoun-Pronom ingqinelwanga ngqo-I-Glograry yesiGrike yesiFrentshi
Umthandazo kwiWadi Ukuhlaziya